Circuits of Value စျေး - အွန်လိုင်း COVAL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Circuits of Value (COVAL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Circuits of Value (COVAL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Circuits of Value ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $851 157.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Circuits of Value တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Circuits of Value များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Circuits of ValueCOVAL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00117Circuits of ValueCOVAL သို့ ယူရိုEUR€0.000991Circuits of ValueCOVAL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000895Circuits of ValueCOVAL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00107Circuits of ValueCOVAL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0106Circuits of ValueCOVAL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00738Circuits of ValueCOVAL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0261Circuits of ValueCOVAL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00437Circuits of ValueCOVAL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00156Circuits of ValueCOVAL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00163Circuits of ValueCOVAL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0262Circuits of ValueCOVAL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00904Circuits of ValueCOVAL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00634Circuits of ValueCOVAL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0875Circuits of ValueCOVAL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.197Circuits of ValueCOVAL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0016Circuits of ValueCOVAL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00177Circuits of ValueCOVAL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0364Circuits of ValueCOVAL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00813Circuits of ValueCOVAL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.124Circuits of ValueCOVAL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.39Circuits of ValueCOVAL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.448Circuits of ValueCOVAL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.086Circuits of ValueCOVAL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0324
Circuits of ValueCOVAL သို့ BitcoinBTC0.0000001 Circuits of ValueCOVAL သို့ EthereumETH0.000003 Circuits of ValueCOVAL သို့ LitecoinLTC0.00002 Circuits of ValueCOVAL သို့ DigitalCashDASH0.00001 Circuits of ValueCOVAL သို့ MoneroXMR0.00001 Circuits of ValueCOVAL သို့ NxtNXT0.0862 Circuits of ValueCOVAL သို့ Ethereum ClassicETC0.00017 Circuits of ValueCOVAL သို့ DogecoinDOGE0.345 Circuits of ValueCOVAL သို့ ZCashZEC0.00001 Circuits of ValueCOVAL သို့ BitsharesBTS0.0446 Circuits of ValueCOVAL သို့ DigiByteDGB0.04 Circuits of ValueCOVAL သို့ RippleXRP0.00405 Circuits of ValueCOVAL သို့ BitcoinDarkBTCD0.00004 Circuits of ValueCOVAL သို့ PeerCoinPPC0.00385 Circuits of ValueCOVAL သို့ CraigsCoinCRAIG0.526 Circuits of ValueCOVAL သို့ BitstakeXBS0.0493 Circuits of ValueCOVAL သို့ PayCoinXPY0.0202 Circuits of ValueCOVAL သို့ ProsperCoinPRC0.145 Circuits of ValueCOVAL သို့ YbCoinYBC0.0000006 Circuits of ValueCOVAL သို့ DarkKushDANK0.37 Circuits of ValueCOVAL သို့ GiveCoinGIVE2.5 Circuits of ValueCOVAL သို့ KoboCoinKOBO0.262 Circuits of ValueCOVAL သို့ DarkTokenDT0.00107 Circuits of ValueCOVAL သို့ CETUS CoinCETI3.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 23:50:02 +0000.